musha Europe Fomura Imwe Dhiraivha Esteban Ocon Childhood Nhau Plus Untold Biography chokwadi
Yedu Esteban Ocon Biography inotaurira Chokwadi pane yake yehucheche nyaya, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki (Laurent Ocon naSabrine Khelfane), Mhuri, Musikana (Elena Berri).
Moreso, ivo vemuFrance Athlete Vanun'una, Hupenyu hwePamoyo, mambure akakosha, Mararamiro, uye Mubhadharo.
Muchidimbu, tinokupa iwe mufananidzo wakazara weiyo Hupenyu nhoroondo yeEsteban Ocon, Formula One, Mujaho wemujaho weMota.
Memoir yedu inotanga kubva pamazuva ake ekuzvarwa kusvika ave zita remhuri mumutambo weCar Mujaho.
Kuti uwedzere rudo rwako rweBiography, tinopa gwara nzira yezviitiko zvakakomberedza hupenyu hwaEsteban Ocon. Pasina kupokana, iyo mifananidzo yaunoona pazasi inopfupikisa nhoroondo yehupenyu hwake.
Esteban Ocon Biography - Tarisa Hupenyu hwake kubva pakuzvarwa kusvika Kubudirira kwake.
Ehe, isu tinomuzivisa iye semutyairi wekutanga weFrance kubuda achikunda mumujaho weFormula One mumotokari yeFrance, aine injini yeFrance, kubvira 1983.
Kunyangwe akarumbidzwa, tinoziva kuti vashoma chete vateveri vakaverenga chidimbu chidiki cheEsteban Ocon's Biography.
Naizvozvo, isu takaona zvakakodzera kuti tikushandirei inonakidza nyaya yaEsteban Ocon uye nekuparara kweruzivo rwekumhanyisa mota iye zvino. Zvino, pasina kumwe kunonoka, ngatitangei.
Esteban Ocon yehucheche nyaya:
Kune ekutanga Biography, iye ane zita remadunhurirwa - Oconsistency. Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane akazvarwa munyika ino pazuva re17th yaGunyana 1996 kuna amai vake, Sabrine Khelfane, uye baba, Laurent Ocon, makanika.
Hupenyu hwedu hweFrance hwakazvarwa muEvreux, Normandy, muFrance, semwana wega wababa naamai vake.
Esteban Ocon akaberekwa mumubatanidzwa pakati pevabereki vake (Laurent Ocon naSabrine Khelfane), vane mifananidzo iri pazasi.
Tarisa baba vaEsteban Ocon, Laurent Ocon, uye amai, Sabrine Khelfane.
Zvakajairika kuti vanhu vakuru vapotse nguva dzavo vachiri vadiki. Pane kupokana, Esteban Ocon inogona kusagovana nemanzwiro akafanana.
Tinogona kutaura kunyanya nekuti akamanikidzwa kutsungirira imwe yenguva dzake dzakaomarara dzehupenyu achiri mudiki.
Kunyangwe ivo vabereki vake vakaita chikuru chechibairo, iye akaona kufanoona kwekupisa kwezvibayiro izvozvo. Baba vake vaive makanika.
Saka kwaive kutanga kwaEsteban Ocon kukurumidza kumotokari dzakadyara mhodzi yeMujaho maari.
Mufananidzo wehudiki waEsteban Ocon.
Esteban Ocon aive mukuru fan weaimbova Formula One mujaho mutyairi, Michael Schumacher.
Sezvineiwo, Ocon inoramba ichitaurirana nemwanakomana wechiGerman Mick Schumacher; vakasangana kuburikidza nejunior renji. Nekudaro, ainakidzwa nekuona Schumacher achikwira yake Ferrari neMercedes.
Uye, hongu, anofanira kunge akadzidza zvinhu zvishoma kubva kwaari. Sezvineiwo, Esteban Ocon akakura akapfeka kutaridzika zvakafanana nengowani yaMichael; zita chete rakachinjwa.
Kunyangwe iwo ruvara rwachinja ikozvino, dhizaini yakafanana neyaMichael Schumacher. Ona zvidimbu pazasi kuti uwane rumwe ruzivo.
Esteban Ocon Mhuri Yemhuri:
Pane imwe nguva muupenyu hwaEsteban Ocon nevabereki vake, vakagara mukaravhani kwemakore matatu.
Vaiva vatatu vavo: Esteban Ocon, vabereki vake (Laurent Ocon naSabrine Khelfane), uye imbwa yavo, nyoka. Vakatenderera Europe yese, vachitora chikamu mumakwikwi akasiyana eKarting.
Baba naamai vaEsteban Ocon vakatengesa imba yemhuri uye nzvimbo yeMechanic kuti vawane mari yekufambisa. Vakanga vasiri imba yakapfuma. Kunyangwe zvakadaro, mhuri yakashanda nesimba kuti vatsigire Ocon yekumhanyisa basa.
Esteban Ocon Mhuri Yakatangira:
Tisati tatanga, mujaho wemotikari wechidiki hunhu hwemitauro yakawanda. Esteban Ocon anotaura inenge mitauro mina.
Kunyangwe akaberekerwa muMalleville, Evreux, Upper Normandy (awa nehafu pakutyaira kubva kuParis), ane dzinza rakasanganiswa.
Esteban Ocon anobva kuSpanish neAlgeria. Mhuri yababa vake yakatanga kubva kune maneja muSpain anonzi Malaga.
Pamusoro peizvozvo, akave ari mugari wenyika semugari weAmerica nekudaro ane hukama huviri.
Nokureva, tinogona kupedzisa kuti Esteban Ocon muFrance -America wedzinza rakasanganiswa asi anobva kuEvreux, Normandy, muFrance. Ona nhoroondo yemadzitateguru ake mumufananidzo pazasi.
Mifananidzo yekuratidzira yemhuri yaEsteban Ocon.
Esteban Ocon Hupenyu hwepakutanga (Basa):
Wechidiki chap akatanga kutamba mu2006 kuna 10. Esteban Ocon akatanga Kubudirira muKarting, kwaakakunda mumakwikwi mazhinji. Yaive panguva iyoyo yaakapedza ari munzvimbo yechisere muFrench Minime Championship.
Ocon yakafambira mberi zvakadzikama mumakore anouya ikasaina chibvumirano neimwe hanzvadzi hanzvadzi yeRenault, Gravity Sports Management, pa14.
Esteban akaita kutanga kwake mune imwechete-zvigaro muna 2012. Akatora chikamu muEurocup Formula Renault 2.0 uye akapedza regumi nemana. Kubva ipapo, akakwidziridzwa kusvika panhamba yechitatu mumatanho nemapodhiamu matatu kuzita rake muna3.
Iyo young chap yakatanga karting mu2006 pa10.
Esteban Ocon Dzidzo:
Izvo zvakakodzera kuti uzive kuti dzidzo yepamutemo yanga isiri yekutanga kune imwechete, senge mutambi weamateur. Kunyangwe zvaisungirwa kuenda kuchikoro, yake yekutanga Karting yakanyanya kutarisisa.
Kunyangwe Esteban Ocon aive nedzidzo yepamusoro, akarasikirwa nemakirasi mazhinji nekuda kwebasa rake rekukamba. Nekudaro, aifanirwa kutsungirira kudzidziswa kubva kumba naamai vake, Sabrine Khelfane.
Pane imwe nguva, mushure mevhiki yekumhanya, karavhani yavo yakamiswa pamberi pechikoro chake. Nekudaro, aigona kumuka opinda mukirasi kurin'i yechikoro.
Nekudaro, zvakawanda gare gare, akanyoresa nababa vake, Laurent Ocon, kuGravity Academy. Gravity Sport Management inomhanya neMcLaren racing director uye aimbove mukuru weLotus timu Eric Boullier.
Esteban Ocon Biography- Mugwagwa Unoenda Mukurumbira:
Zvipiriso zvakaitwa nevabereki vake zvinofanirwa kunge zvakamuisa iye pamucheto wemutambo wake. Iye panzvimbo pezvo aisazoda kuodza moyo vabereki vake pamwe nekuita kwavo kwekuisa dongo. Nekudaro, akaisa kumanikidza paari iye kuita kwakanakisa kuita.
Asati atora zita reGP3 Series muna 2015, Ocon akambohwina 2014 FIA European Formula 3 Championship.
Akakunda zvinodakadza Max Verstappen. Zvishoma nezvishoma, akabatana neakagadziridzwa Renault F1 timu semutyairi wekuchengetedza mu2016.
Munguva yake yeGP3 Series zita muna 2015.
Akazadza chigaro chaPascal Wehrlein chakanga chisina munhu muDTM (Deutsche Tourenwagen Masters; German Touring Car Championship).
Nekudaro, pazuva regumi raNovember 10, Ocon akasaina kuForce India timu yemwaka unotevera sechikamu chemakore mazhinji chibvumirano cheMercedes.
Angangove mwaka wake werookie muFormula One. Nenhamba yemota yake se#31, Esteban akapedza yake yekutanga 27 Grands Prix asina kuenda pamudyandigere.
Akarova rekodhi yaMax Chilton kuUnited States Grand Prix ya2017 nekupera kwake kwemakumi maviri nematanhatu. Zvakare, aive neDNF yake yekutanga mu26 Brazilian Grand Prix.
SaMuchengetedzwa weMercedes Junior mu2016.
Esteban Ocon Biography - Simuka kune mukurumbira:
Ocon yaizoenderera mberi mu2018 uye ichienderera kunze-kukodzera Perez. Asati apfuura ipapo, akatyaira kuenda kuHome India pamwe chete Sergio Perez mune ingangove mwaka wake wekutanga muFormula One.
Multiple kuvimbika kuputsika uye kunetsekana kwaizokonzera Ocon mapoinzi akawanda mukumira uye kuvhara kumwe kufambira mberi kwaaive aita.
Esteban akapedza mwaka ari pachinhanho chechigumi nembiri ndokuzogadzirira mwaka wa12. Nekuda kweizvozvo, Racing Point yakabva yatsiva Ocon naLance Stroll.
Ocon yakadzokera kune grid mumwaka wa2020. Sechikamu chekuvandudza kwake mumwaka wese, zvakare akapedza wechipiri kuSakhir GP akateedzana e2020.
Nekudaro, kuchengetedza yekutanga podium yebasa rake. Chaive chiitiko chakanakisa cheRenault kubvira 2010. Zvichienderera mberi, Renault yakadzorerwa zvakare seAlpine F1 Team mwaka we2021.
aipedza wechipiri kuSakhir GP akateedzana e2020.
Vakasaina mukwikwidzi wenyika mbiri-mbiri Fernando Alonso semubatsiri weOcon. Kunyangwe hazvo akasangana nematambudziko mashoma seAlpine F1 Chikwata, Zvakapera pane chinyorwa cheshamwari.
Akabheja chinzvimbo chepamusoro. Esteban Ocon akahwina mhirizhonga yeHungary Grand Prix, achimiririra Sebastian Vettel kukunda uye mhandara yeAlpine Formula One kukunda.
Esteban Ocon anokunda iyo Hungarian Grand Prix 2021.
Chii chaizvo chakaitika kuHungary Grand Prix 2021?
Mujaho uyo unozodzikira seimwe inoshamisa wakambotaridzika kusanzwisisika kubva pakutanga kusvika pakupedzisira, zvinonyanya kukonzerwa nemvura yakazotanga inenge hafu yeawa mujaho usati waitwa.
Lewis Hamilton shamwari yake Valtteri Bottas akanga aongorora zvisizvo nzvimbo yake yebhureki pakutanga panjanji yakanyorova.
Saka, zvine simba zvakadhumhana muMcLaren's Lando Norris, uyo akasundirwa muRed Bull's Verstappen. Valtteri Bottas zvakare akabva atora yechipiri Red Bull yaSergio Perez.
Ferrari's Charles Leclerc aitarisa panzvimbo yechipiri kumashure Lewis Hamilton, chete kuna Aston Martin's Lance Stroll kuita chikanganiso.
Akanonoka kubata bhureki, akatsvedza pahuswa, ndokupwanya Charles Leclerc's Ferrari, iyo yakabva yakonzera McLaren's Daniel Ricciardo kuruka.
Iine marara munzira yese uye mota dzakadzokera kumakomba (apo vatyairi vanomira vowana mamwe mafuta kana kugadzirisa mota dzavo), Red Bull yakatanga kuedza kugadzirisa. Max Verstappen's motokari.
Iko kukuvara kwaive kwakakura, aine zvidimbu zvisipo kubva pasi uye ruoko rwake rwerudyi zvidimbu zvemuviri pamota yake zvakange zvaenda, zvichikonzera huwandu hwakawanda hwevakarasikirwa pasi (izvo zvinodiwa kuti urambe uchimhanya kuburikidza nemakona).
Zvakaguma sei Esteban Ocon seMutungamiri:
Esteban akatungamira mujaho kubva pekutanga kumira kwaLewis, uye iye naVettel vakakwanisa kuzorora, vachivaka kutungamira kwemasekondi gumi neshanu, sezvo vamwe vakasimudzwa. Vettel aive nekuwedzera kumhanya, asi Esteban akatyaira nekukura kuti azvidzivirire chiGerman kumakwikwi ese.
Vettel uye kumira kwaAston Martin pakati pemujaho kwakapa Esteban nzvimbo yekufema kuti auye mumutambo unotevera pasina kumanikidzwa kukuru uye kuchengetedza kutungamira.
Kune rimwe divi, Vettel akaswedera pedyo kakawanda, asi Esteban aigara asingasviki uye akamirira kuhwina kwake kwekutanga. Yakanga iri yekutanga kukunda kweAlpine's Team.
VeAlpine vakashanda pamwechete kuchengetedza kukunda kusvika kumagumo. Fernando Alonso akaramba achinonoka uye achidzivirira Lewis Hamilton. Panguva iyo Hamilton akanga awana nzvimbo, yakanga yanyanya kunonoka.
Alonso akaburitsa masterclass yekudzivirira kurwisa Hamilton iyo yakabatsira mujaho weEsteban Ocon mukukunda kutungamira. Ona clip iri pazasi kuti uwane yakazara maonero.
Ndiani Esteban Ocon Kufambidzana?:
Kutarisa pakutanga kwebasa rekutanga kwechidiki chap, aiita kunge arasikirwa nehupenyu hwake hweRudo. Zvisinei, iwe unofunga kuti hukama hwake hwakamira sei?
Sezvineiwo, mishumo ine kuti kunyangwe asina kuroora, Esteban Ocon ari muhukama.
Ane musikana anonzi Elena Berri. Vaviri vacho vakasangana muValencia, Spain, muna 2017. Akanga asingazivi kuti Esteban aiva mutyairi weFormula one.
Saka, vakatanga kupedza nguva yakawanda uye vari kuchengeta nyaya yavo yakaderera-kiyi kure nekuzivikanwa.
Collage yeEsteban Ocon uye rudo rwehupenyu hwake, Elena Berri.
Zvimwe pamusoro pemusikana waEsteban Ocon - Elena Berri:
Iye muenzaniso weItari uye wezvemagariro midhiya anokurudzira, anonyanya kuzivikanwa kuve musikana weEsteban Ocon.
Isu tinoziva zvakare Elena Berri nerunako rwake runoshamisa uye inonakidza fashoni pfungwa. Akauya pasi pano pazuva regumi nematatu raAugust 13 muTurin, Italy.
Mukupesana, iye ndewenyika yeItaly uye zvakare wedzinza rakasanganiswa. Iye mudzidzi weBusiness Management kuGeneva.
Muenzaniso wechidiki uyu une vateveri vangangoita makumi matatu neshanu paakaundi Instagram, @elenaberrireal, kwaanotumira mifananidzo yemodelling yake nekushanda kunze. Elena Berri parizvino anogara kuGeneva, Switzerland.
Elena Berri - Musikana waEsteban Ocon - wemuItaly modhi uye pasocial media influencer.
Hupenyu hweMhuri hweEsteban Ocon:
Hatigone kudzikisira kuti vabereki vaEsteban Ocon (Laurent Ocon naSabrine Khelfane) vakazvipira sei kwaari.
Kubudirira kwemukwikwidzi wemitambo weFrance uye chimiro chembwa chinobva mukuzvipira kwemitezo yemhuri yake. Zvino, ngatitarisei zvakaringana pane chimwe nechimwe chazvo.
Mufananidzo wemhuri yese yeOcon.
Nezve Esteban Ocon Baba - Laurent Ocon:
Baba vaEsteban Ocon, Laurent Ocon, ndizvo zvinonzi neBritish grafter yakakodzera. Aishanda nesimba zvekuti akapedza maawa akareba zvisingaite kumusangano wake weMechanic. Chikonzero chebasa rake rakaoma ndechekuona kuti zvaidiwa nemhuri yake zvasangana.
Laurent Ocon ndiMakanika uye aive negaraji diki mumupata unofadza paRwizi Rwizi, Evreux, kuNorth France. Baba vaEsteban Ocon vakatengesa mota uye vakaigadzirisa sevashandi. Mhuri yese yakarara pauriri hwepamusoro pamusoro pegaraji remakanika.
Mufananidzo wakajeka wababa vanozvikudza uye mwanakomana akazadzikiswa.
Zvakangodaro, nechinangwa chekutsigira uye nekutsigira Esteban Ocon basa rekutanga reKarting, akatengesa imba yemhuri uye makanika garaji. Nekudaro, ivo vaigara mumaravhani aifamba-famba muEurope, vachiratidza kukwikwidza kwekarting.
Kunyangwe wedzinza reSpain, iye ari nyika yeFrance. Akaroora rudo rwehupenyu hwake, Sabrine Khelfane. Imba yavo ine mwana mumwechete wekuzviratidza. Hazvishamisi kuratidza kwavo kwekusazvipira kwerudo uye kumuda.
Nezve Esteban Ocon Amai - Sabrine Khelfane:
Kunyangwe isu zvave zvakaoma kuti tione basa rake, Sabrine Khelfane Ocon chikamu chebudiriro huru yeEsteban Ocon. Sezvakataurwa, akadzidzisa mwana wake mumwe chete iye aisakwanisa kuenda kuchikoro.
Sabrine Khelfane, akabatana nemurume wake, Laurent Ocon, akatenda zvakanyanya muhukuru hweEsteban Ocon. Uye saka, vakazviramba pachavo kunyaradzwa kukuru. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Mufananidzo wemhuri weEsteban nababa vake naamai, Sabrine Khelfane.
Nezve Esteban Ocon Siblings:
Sezvaunofanira kunge wakacherekedza, ichitevera nyaya yedu, Esteban Ocon akange asina hama. Ndiye chete mwana wemubereki wake. Nekuda kweizvozvo, akatarisisa amai vake nababa muhudiki hwake, kusvika mukurumbira wake.
Nezve Esteban Ocon Hama:
Iyo French Formula One Champion inofanirwa kunge iine dzimwe hama. Esteban Ocon ane mashoma emitezo yemhuri yake parutivi nevabereki vake, sehama nasekuru, nasekuru nasekuru.
Kunyangwe ipapo, isu tinonzwisisa zvishoma nezvavo. Pamusoro pazvo, isu tinoziva kuti vashoma veEsteban's Cousins ​​vanogara muSpain.
Kunyangwe neyakajairika tsika yekuve mukurumbira fomula imwe inomhanya Champ, Esteban Ocon ichiri kugadzira nguva yekuzorora. Mutambi wechiFrench anofarira Karting, kushambira, Tafura Tennis, Nzira Yekuchovha, uye Kuona Mafirimu munguva yake yemahara.
Mutambi weFrance anofarira kushambira uye kuchovha bhasikoro.
Moreso, anoedza zvakanyanya kushandisa nguva nemusikana wake, Elena Berri. Nzvimbo yake yaanofarira yekuenda uye chikafu iSeychelles neBurger neKebab, zvichiteerana. Akakundawo moyo wevateveri vake vari kuwedzera.
Esteban Ocon anoshandisa vezvenhau senge chikuva chekutaurirana navo. Yake Instagram account yega ine vanopfuura mamirioni (1) vateveri.
Ocon, kusaina autograph yekuchengetedza hukama nevateveri vake vari kuwedzera.
Esteban Ocon Mararamiro:
Kunyangwe achizvininipisa, achitenda, uye achizviziva kwake kwake kwaakabva Esteban Ocon parizvino anorarama hupenyu hwakanaka.
Panguva ino yehupenyu hwake, anokwanisa kutenga chero mota dzepamusoro kubva kuFerraris kuenda kuMcLarens nemaPorsches kuenda kuLamborghinis nedzimba dzinodhura.
Collage yeEsteban Ocon iine mashoma emota dzake.
Ocon inowana yakawanda kubva kune yake pro mujaho basa sezvo iye achitamba machisi ezvakawanda zvigadzirwa seRenault neMercedes Benz. Zvinoenderana nemitambo chaiyo, mambure ake anokosha anenge madhora zviuru zvishanu (5 mamirioni emaEuro).
Sekureva kwechibvumirano chekare cheEsteban Ocon, mutyairi weAlpine anowana madhora zviuru zvishanu pagore.
Nekudaro, Tichifunga nezvekuita kwake kunoshamisa munguva pfupi yapfuura, munhu anogona kutarisira kuti French Racer iwane pasuru iri nani nekondirakiti yake nyowani yakawanda-gore. Chibvumirano chaEsteban Ocon neAlpine f1 timu inosara kusvika kupera kwemwaka wa2024.
Mamwe masosi emari yake inopinda anotsigirwa kubva kumabhureki uye anoonekwa pazviitiko. Zvimwe zvigadzirwa zvinosanganisira Castrol, Infiniti, RCi, MAPFRE, BP Ultimate, Dupont, Microsoft, Bell, naRoss.
Esteban Ocon Untold Chokwadi:
Kunze kweruzivo rwataurwa pamusoro apa, pazasi pane zvishoma chokwadi chingafadza fancy yako.
Chokwadi # 1: Rubatsiro rweMari:
Kunze kwevabereki vake, vanhu vashoma, vakaita saEric Boullier, vakabatsira mukubudirira kweEsteban Ocon.
Eric Boullier akawana iyo Formula imwe Champ. Akamuita kuti anyorerwe mu
Renault Chikoro. Iyi nyasha yakaderedza kumanikidzwa kwemari vabereki veOcon vakapfuura nako.
Chokwadi # 2: Presidential Kokorodzano meseji:
Mutungamiri weFrance, Emmanuel Macron, akorokotedza Ocon pasocial media
mushure mekuva wechi14 cheGrand Prix Winner.
VaFrance vakati: “Tinofanira kuita basa rimwe chete kumberi kana kumashure.
Chokwadi # 3: Kufungisisa kwekutanga kukunda Formula One:
Kunyangwe Esteban Ocon aive naFernando Alonso, isu taimuziva nekuda kwehunyanzvi hwekunyepedzera sekubatana naye. Chave chiri chiitiko chinonakidza, Ocon inorondedzera.
Esteban Ocon akarondedzera kukunda kwake kusatarisirwa kwekutanga kweFormula 1 se "nguva hombe" mune rake basa, achirumbidza mutambi weboka ane mukurumbira Fernando Alonso. Iye anotarisira tariro ndiko kukunda kwekutanga kwevakawanda kune Alpine.
Esteban anopemberera sezvaanotarisira kuti ndiko kukunda kwekutanga kwevazhinji kwake Alpine.
Esteban Ocon Biography Pfupiso:
Zvakanakisa kuzivikanwa nekuda kwemitambo yake kuita kwakawanda uye kugona kutyaira nemazvo. Esteban Ocon akabudirira kuzviisa pamusoro pebasa rake.
Kubudirira kwake kwakamufadza kumoyo yevazhinji. Zvakare, akaunza kukunda kwemutungamiri weFrance, Emmanuel Macron, nevagari vayo vese.
Nekudaro, kunyangwe kana iwe ukatadza kuenda kuburikidza nezvose zviri pamusoro, shandisa tafura iri pazasi kuti uwane ruzivo rwakajeka nezveFrench Fomula yekutanga.
Esteban Ocon Biography Dhata
Zita rizere: Esteban Jose Jean-Pierre Ocon-Khelfane
Zita rekudanwa: Stephen Ocon
Zuva rekuzvarwa: 17th Zuva raGunyana 1996
Nzvimbo yekuzvarirwa: Evreux, Furanzi
Basa: Fomura Imwe Mujaho Mutyairi
Matimu: Manor (2016), Force India (2017-2018), Mercedes (2019), Renault (2020), Alpine (2021-)
Baba: Laurent Ocon
Amai: Sabrine Khelfane
Musikana: Elena Berry
Hobbies: Carting, Tafura Tennis, Mugwagwa Webhasikoro uye Kuona Mafirimu
kukwirira: 6 ft 1 mu (1.86m)
Net Worth: $ Miriyoni 5
Muhoro: $ Miriyoni 5
Dzinza / Race: Mixed
Mukupedza Esteban Ocon's Biography uye Yehucheche Hupenyu Nyaya, Tinovimba wakadzidza zvishoma zvidzidzo. Vabereki vaOcon vakaona tarenda rake muKarting uye vakaona ramangwana rakajeka, saka vakabatsira kusimudzira tarenda iri.
Iko kusimuka kwekufona kwemubereki wese uye mubereki anoda. Kuzvipira kwaunoitira vana vako kana vakatumirwa nenzira kwayo pasina mubvunzo kuchapa mubayiro. Vabereki vanofanirwa kuteedzera kushuvira kwemawadhi avo uye rega rudo rutungamiri.
Tinotenda kuti iwe wawana izvi kunyora-up zvinofadza uye zvinonakidza. Nyorera zvimwe zvebhaibheri chokwadi neepamusoro-notch mhando.